Sawirro: Xafladii musharax Cabdicasiis Laftagareen oo soo idlaatay goor dhow
arlaadi October 27, 2018 No Comments
Waxaa magaalada Baydhaba ee xarunta KMG maamulka Koonfur goor dhowayd kusoo idlaatay munaasabad uu kaga dhawaaqayay musharaxnimadiisa madaxweynaha maamulka KGS mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan (Laftagareen)
Munaasabada oo ay kasoo qayb galeen xildhibaano ilaa 100 ah qaarkoodna wasiiro ah kana tirsan baarlamaanka Koonfur galbeed, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlada Soomaaliya, nabadoonada Koonfur galbeed, aqoonyahanada, ururada dhalinyarada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka, ayaa uu mudane Cabdicasiis Laftagareen kaga dhawaaqay inuu u taaganyahay qabashada xilka ugu sareeya maamulka Koonfur galbeed ayada oo ay 17ka bisha November dhaceyso doorashada madaxtinimada maamulkaas.
Musharaxa ayaa balanqaaday inuu wax ka qabanayo amniga deegaanada Koonfur galbeed iyo kan xildhibaanada maamulka Koonfur galbeed.
Mar uu ka hadlayay sida ay muhiim u tahay inay dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada u yeelan lahaayeen wada shaqayn ayaa uu sheegay inaysan suurta gal ahayn inaysan wada shaqaynin maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe.
Wasiiradii ka socday dowlada federaalka ayaa taageero la dhinac istaagay musharax Cabdicasiis Laftagareen oo ka mid ah musharixiinta ugu cad cad ee u taagan xilka madaxweynanimada maamulka Koonfur galbeed.
Dhanka kale musharaxa ayaa mar uu ka jawaabayay eedayn shalay kasoo yeertay madaxweynaha xiligiisu dhamaaday ee maamulka Koonfur galbeed, waxa uu sheegay inaysan jirin ciidamo ay keeneen magaalada Baydhaba islamarkaasna gawaarida xabadu aanay karin la iibsado balse uusan ogoleyn in lala haysto waxa uu haysto.
Si kastaba ha ahaatee xafladdii maanta ayaa ahayd mid si heer sare ah kusoo idlaatay ayada oo ay halkaas heeso dhiirigelin iyo taageero ah ka qaadeen fanaaniinta kooxda Horseed.